GoAnimate: Kere, Mepụta na Kesaa Animated Videos | Martech Zone
GoAnimate: Kere, Mepụta na Kesaa Animated Videos
Thursday, August 22, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Anyị na-elekwasị anya na vidiyo na ụtụtụ a n'ihi na ọ bụ isi ihe dị mkpa nke atụmatụ ọ bụla. Animation na-enye ihe ịrịba ohere. Anyị nwere kediegwu animator na anyị ọrụ ma mmepe, mmepụta na ịsụgharị vidiyo vidiyo ndị ahụ nwere ike were izu.
Goanimate bụ ikpo okwu ebe azụmahịa ọ bụla nwere ike ịmepụta ma jikwaa vidiyo nke ha. Ma ugbu a ị nwere ike chekwaa 40% na ndenye aha azụmahịa nke 3 Month iji njikọ njikọ anyị!
Echefukwala uru ha dị na vidiyo. Ihe nkiri vidio na-enye gị ohere ịkọ akụkọ gị n'olu dara ụda! With naghị eji kamera ewere ihe omume aghara aghara. You're na-ekwusi okwu ike, n'ụzọ doro anya na enweghị mmachi.
Rọọ iwu nke okike - Animation, ya ike slide akpịrịkpa na ehulata iwu nke uwa, na-enye mgbanwe n'ezie weta ngwaahịa uru ndụ.
Nye echiche gị gburugburu - Cheedị banyere ịmalite na nsochi nke osisi, wee gbanye iji gosi oke ọhịa ahụ, wee gbawa elu na mbara igwe maka BIG dị elu. Ihe nkiri vidio na-eme ka ọ dị mfe itinye ya niile n'ọnọdụ.
Na-anọchite iche iche - Ihe odide anyị nwere ike ịhazi ọtụtụ narị agba dị iche iche. Na-anọchite anya ụdị dị iche iche nke ọma, na-enweghị ịhapụ ndị na-eme ihe nkiri nke agbụrụ ma ọ bụ ndabere.
Chọpụta ụzọ dị iche iche - Site na vidiyo eserese, esighi egbochi gị ịme vidiyo. Gbanwee nzụlite, megharia mkpụrụedemede, gbakwunye nkwado. Nwalee ụzọ dị iche iche iji kpọtụrụ ozi gị.
Gbanwee echiche n’ime ihe ngosi - Animation dị mma n’igosi usoro dị n’usoro. Ọ ka mma na igosipụta echiche dị n’azụ usoro, site na ịmegharị ihe site na nkịtị gaa na nghọta dị mfe.
Ma oburu n’inwe obi uto na inwere onye mmebe ihe osise n’ime ulo, inwere ike bulite onyonyo nke gi! Chekwaa 40% na ndenye aha azụmahịa nke 3 Month taa!.
Tags: vidiyo na-esegoanimateVidio Ahịa
4 Echiche Productiongha Mmepụta vidiyo na Ngwọta Ha
Aug 22, 2013 na 10: 09 AM
Daalụ Doug Aga m elele nke a!
Aug 29, 2013 na 9:28 PM
Ihe nkiri Animated bụ nhọrọ kachasị mkpa nke usoro mgbasa ozi ọkachasị na mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ na - enye ohere ka ika ma ọ bụ ọrụ ahụ webata ma ghọta ya nye ndị na - ege ntị ngwa ngwa ma e jiri ya tụnyere ịdebanye okwu ma ọ bụ eserese. Ọnụ ọgụgụ njigide dịkwa elu ma e jiri ya tụnyere mgbasa ozi ọdịnala.
Maka vidiyo na-akọwa Animated, Etu vidiyo, ihe nkiri eserese na vidiyo ndị ọzọ na-akọwa katoon, nwere ike ịchọ ịlele ụmụ okorobịa ndị a na Studio Explaininja.